Ihe kachasị mma 23 bụ Atụmatụ Echiche Idebe Maka Ụmụ nwoke na Ụmụ nwanyị - Atụmatụ Echiche Tattoos
Ihe kachasị mma 23 bụ Idezi Idebe Maka Ụmụ nwoke na Ụmụ nwanyị
Nhọrọ ị ga-egbu egbu bụ ihe na-ekwesịghị itinye ya. Agbugbu ga-adịgide na akpụkpọ gị maka ihe ọ bụla fọdụrụnụ ná ndụ gị, ọ gwụla ma ịchọrọ ịnweta ịwa ahụ nke siri ike. Otú ọ dị, nchịkọta dị mma dị mma nke na ị gaghị enwe ike ịghara ịma mma ahụ metụtara ya.
1. Ihe kachasị emetụ egwu - Papa gị na-eduzi m n'ubu m ga-anọnyere m ruo mgbe ebighị ebi.
2. Ụdị Echere Dị Mma Maka Ụmụ nwanyị - Kwụsị dị ka nru ububa nke na-adị dị ka anu
Ọ dị mkpa na ọ bụrụ na egbu egbu ahụ ezuola ntakịrị ma bụrụ nke zuru ezu, mgbe ahụ ị nwere nhọrọ ịchọrọ egbu egbu na egbugbu ọzọ. Ma nchịkọta nke nchịkọta na-adịghị mfe.
3. Ogwe aka agha dị mma - Ịhụnanya bụ naanị nne
Na ohere na ị na-egbu egbu na-egbuke egbuke, mgbe ahụ ọ ga-adị mkpa ka ị nwee ụdị #tattoo ọzọ nke ga-aba uru dị ka nke a.
4. Ogbugbu bara oke uru - Echefukwala ịhụ onwe gị n'anya
Ọ bụrụ na ịchọrọ igbu egbu onye aha gị, mgbe ahụ, ọ ga - abụ onye si na ezinụlọ gị na ị hụrụ n'anya ma nwee njikọ nke ya na onye ahụ iji mee ka ọ baa uru.
5. Ihe niile anaghị eme m ihe niile m bụ
Ndị mmadụ ole na ole ga-achọ inwe aha enyi nwoke na enyi ha na ha, ma ọ bụ ha na-ahọrọ ma hà na-eme nke a ma ọ bụ na ha adịghị. Otú ọ dị, jiri egbu egbu dị mma, ị ga-enwe mmasị na ya.
6. Okwu dị mfe okwu tattoo echiche maka ụmụ nwanyị
Ntucha bara uru maka umu nwanyi bu ihe di iche iche bu ihe mere na i nwere ike inwe ihe di iche n'aru aru
7. Okwu okwu bara uru maka umuaka - nku gi di njikere zụrụ obi m
Ntucha ndị mara mma dị mma nke ukwuu na ịkọwapụta na ị gaghị ada mbà mgbe i nwere ha.
8. Okwu dị mfe okwu dị oke ọnụ na-egbugbu nwa agbọghọ azụ
Tupu ịmechaa egbu egbu bara uru, ị ga-atụle ihe dị gị mkpa iji gaa n'ihu ọha ma ọ bụ ihe ị na-achọ iji mezuo mgbe ị na-egbu egbugbu gị.
9. Atụmatụ egbu egbu dị mfe ma dị mma
Ọ bụrụ na ịchọrọ ihe dị iche iche a haziri ahazi dị ka egbu egbu bara uru, ị kwesịrị ị hụ na ihe niile banyere egbugbu gị dị ike.
10. Okwu ima ima okwu
Ọ bụrụ na ị naghị enwe afọ ojuju na ihe e dere na ahụ gị. Ọ bụ ihe amamihe dị na ị na-aga maka nchịkọta bara uru dị mfe dị ka nke a
11. Nnukwu egbu egbu - Anyị bụ ndụ na anyị bụ ọnwụ
Ịkwesighi ịkwaga ebe dị anya tupu ị nwee ike igbu egbugbu nke bara uru dị ka nke a. Ọbụna ị nwere ike ịmepụta egbugbere ọnụ dị mma nke dị mma ma mara mma.
12. Okwu pụtara okwu egbu egbu
Otu egbu egbu bara uru bụ ihe ị kwesịrị ịghọta. Mgbe ị nwere egbu egbu dị ka ihe mara mma dị ka nke a, ndị mmadụ na-agụ mgbe niile ma chọọ ka gị na gị nọrọ mgbe ha hụrụ ebe ị na-egbu egbu.
13. Okwu okwu bara uru - Akuko ọ bụla nwere njedebe ma na ndụ ọ bụla agwụcha bụ mmalite ọhụrụ
Ọ dịghị akụkọ na-amalite ma mechie otu ụzọ ahụ nke na-eme na ịnweta tattoos dị egwu nke nwere ihe ọ pụtara. Ntugharị nke nchịkọta bara uru dị jụụ na ozi ndị ahụ gafere bụ eziokwu.
14. Nna m na-egbu egbu maka ụmụ okorobịa - Ụfọdụ ndị anaghị ekwere na ndị dike, ma ha ezuteghị papa m
15. Ogbugbu dị oke mkpa - Bụrụ mgbanwe ịchọrọ ịhụ n'ụwa
Ọ bụrụ na ị na-atụle igbu egbu, akara dị mma maka ụmụ nwanyị nwere ike ịbụ ihe ị ga-achọ ịghọta. Nke ahụ bụ ihe ọtụtụ ụmụ nwanyị na-esote mgbe ha chọrọ ka ahụ jụụ dịkwa mma.
16. Ntu okwu bara uru - E nyere gị ndụ a n'ihi na ị dị ike iji bie ndụ
17. Egwu dị oke egwu ma dị ịtụnanya na nwa agbọghọ azụ
18. Ntucha dị mma maka ụmụ agbọghọ - Echefula ịhụ onwe gị n'anya
Ọ dịghị ihe na-akwadebe gị maka ngosi ahụ na ị banyere onwe gị mgbe ị nwere egbu egbu nke nwere egbu egbu dị mma.
19. Ụdị egbu egbu dị egwu
20. Ị na-anọnyere m na-egbu egbu egbugbu
21. Eji egbuke egbuke egbuke egbuke - n'enweghi mgba o nweghi oganihu
22. Ntucha dị mma maka ụmụ nwanyị
23. Echiche egbugbu bara uru - Aga m achọta ụzọ iji hụ gị ọzọ
Uche obienyí egbu egbuegbu egbuakara ntụpọmma tattoosna-egbu egbukoi ika tattoongwusi pusiọnwa tattoosụkwụ akaegbu egbu diamondụmụnne mgbuenyi kacha mma enyiegbugbu egbugbuegbu egbu egbuaka akaaka mma akaakwara obiegwu egwumehndi imeweegbu egbu hennan'olu oluna-adọ aka mmadi na nwunyeEgwu ugozodiac akara akaraegbu egbu maka ụmụ nwokendị na-egbuke egbukeaka akaegbu egbu ebighi ebiGeometric TattoosAnkle Tattoosarịlịka arịlịkaima ima mmaegbugbu maka ụmụ agbọghọechiche egbugbuokpueze okpuezeudara okooko osisiakpị akpịNtuba ntugharinnụnụegbu egbu okpundị mmụọ oziọdụm ọdụmỤdị ekpomkpaagbụrụ eborip tattoosazụ azụegbu egbu osisi lotusegbu egbu mmiri